‘तपाईहरूलाई बँ, चाउन सक्दो कोसिस गर्छौं, इन्धन सकेर धावनमार्गमा फम राखेर ल्याण्ड ग, राउँछौं’ जब एयर होस्टेजले रुँदै भने-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
‘तपाईहरूलाई बँ, चाउन सक्दो कोसिस गर्छौं, इन्धन सकेर धावनमार्गमा फम राखेर ल्याण्ड ग, राउँछौं’ जब एयर होस्टेजले रुँदै भने-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
September 27, 2021 723
सोमबार बिहान सवा ८ बजे बुद्ध एयरको विमान ७३ जना यात्रु लिएर विराटनगरका लागि उड्यो । करिब एक घण्टा उडान समय रहेको विमान विराटनगरको आकाशमा निर्धारित समयमा पुग्यो पनि ।
कसैले झ्याल खोलिदिन आग्रह गरिरहेका थिए ।यात्रुहरुमा रुवाबासी चलेपछि एयरहोस्टेजहरु उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयासमा लागेका थिए । तर, उनीहरुको आँखा पनि आँशु देखिएको लिम्बुलृे बताए । उनले भने, ‘उहाँहरु (एयरहोस्टेज) ले सकेसम्म बचाउँछौँ भन्नुहन्थ्यो ।
इन्धन सक्ने प्रयास भएको र इन्धन सकिएपछि ल्याण्ड गर्ने बताउनु हुन्थ्यो । उनीहरुको आँखा पनि आँशु थियो ।’काठमाडौँको आकाशमाथि विमानलले फन्को मार्दा आफूले झ्यालबाट विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा रहेको देखेको लिम्बुले बताए ।
Prevप्रेमिकालाई मिर्गौला दिएर मृ, त्युको मुखबाट बचाएको प्रेमिकाले जब बिहे गर्न न, मानेपछि…
Nextके थियो त क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि नि, र्णय ? जसले सबैलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भए
निषेधाज्ञा थप कडा हुने, नयाँ नियममा के गर्न पाइने के नपाइने ? हेर्नुहोस्
विदेशबाट यी १० चिज नेपाल सकारले ल्याउन लगायो प्रतिबन्ध – हेर्नुहोस्
नायिका करिश्माले भेटिन् आफ्नो बाल्यकालको मितिनी, ढोग-भेट पछिसंगै बसेर गरे यस्तो र;माइलो- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
के थियो त क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि नि, र्णय ? जसले सबैलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भए